Impi ye-English Premier League ishubile | Scrolla Izindaba
Impi ye-English Premier League ishubile
Umjaho wezikhundla ku-English Premier League usuqalile – kusukela ezikhundleni eziphezulu kuze kufike ezansi. IManchester City icace bha ngamaphuzu ayisihlanu phezulu kwetafula le-log futhi ibukeka kahle ukunqoba isicoco, kodwa impi yezindawo ezine eziphezulu ishubile.
Amaqembu amane aphezulu amele iNgilandi ku-UEFA Champions League.
Kuze kube manje yizidlakela zeManchester, iCity iUnited, iLeicester City kanye neLiverpool abasezikhundleni eziphezulu, kodwa isizini isesekude ukuphela.
Endaweni yesihlanu iChelsea neWest Ham United basele ngephuzu elilodwa ngemuva kweLiverpool esendaweni yesine. IEverton, iTottenham Hotspur, iAston Villa, iLeeds United kanye neArsenal basazulazula ngamaphiko.
Njengenduduzl, amaqembu azoqeda endaweni yesihlanu neyesithupha azomela iNgilandi ku-Uefa Europa League kanye nompetha be-Emirates FA Cup.
Imidlalo ye-Premier League yemidlalo engama-24 izoba kule mpelasonto kanye nemidlalo emikhulu. ILiverpool esendaweni yesine izovakashela iLeicester City esendaweni yesithathu ngoMgqibelo ngo-2.30 ntambama.
Ngokuhamba kwesikhathi ngoMgqibelo, abaholi iMan City bazokwamukela iTottenham esendaweni yesishiyagalombili ngo-7.30 ebusuku. ICity izobe ibheke ukuqinisa indawo yayo ephezulu ngokunqoba kanti iSpurs izothemba ukuthi ukuwina kwabo kuzobasondeza eduze nendawo ye-Champions League.
Ezansi kwetafula le-log iSheffield United, iWest Brom kanye neFulham bonke bangazithola sebehlisiwe.